Crocus | December 2019
Noocyada ugu caansan ee isku-dhafka
Xoogsheegashadu waxay noqon kartaa mid ammaan ah oo la yiraahdo waraaqaha ugu horreeya ee guga, inkasta oo ay jiraan noocyo dhoobo ah xilliga dayrta. Waxay ka tirsan yihiin qoyska iris waxayna yihiin dhirta qoryaha yar-yar oo leh midab kala duwan oo ah ubaxyo. Maanta waxaa jira ilaa saddex boqol oo nooc oo dhirtaas ah.
Ubaxyo guga qurxoon oo aad u qurxoon ayaa ah mid culus. Waxay bilaabaan inay bararaan guga hore iyo kuwa kale ku raaxee midabkooda illaa toban maalmood. Ka dib markii ubaxyada yaraaday, tufaaxu wali waa mid casri ah oo cusub, laakiin bartamaha bisha Juun iyaguna way iman doonaan. Dheeraad ah, miisaanku wuxuu yimaadaa nasasho. Qodobkani waxaanu u sheegi doonaa wax kasta oo aad xiiseyn karto.